သ ရ ဖီ(Tha Ra Phi)
သတင်း သုတ သီချင်း ကဗျာသစ် အတွေးအခေါ် အထုပ်ပတ္တိ အချစ် ဒေသန္ဒရ နိုင်ငံရေး ဘဝအတွေ့ အကြုံ
ဤမှာမြေပြင် မြစိမ်းဆင်လျှက် ကောင်ကင်မိုးဝယ် နီလာချယ်၍ အိုဘယ့်လူသား နှစ်ရောင်ကြားဝယ် ခန့်ညားပေစ ခန့်ပေစ၊
. အ သူခံကြရစတမ်..... မင်းတို့သိဖို့ ပြောရတော့မယ်
ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွား (ကျော်သူ)
မင်းတို့က ဒီမိုပညာရေးကိုအကြောင်ပြ ကျောင်းသားအစစ်ဆိုပြီး ငါကိုလာညာတော့..... ခံရပြီးပေါ့ကွာ ကျောင်းသားဆိုသူတွေထဲမှာ..... ငါ့ သားသမီးတယောက်မှမပါ
၂၀၀၇ သံဃာအရေးအခင်း ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေမှာလဲ ငါထွက်ပြလိုက်ထာ ဇာဂနာ(မောင်သူရ)အပါဝင်အားလုံး.....ထောင်ထဲရောက် ခဲ့ကြတယ်
ငါကသူကောင်းပြုခံလိုက်ရတယ်.....နာရေးအသင်းမှာ ဥက္ကဌ ခင်ညွန့် က ငါ့ကို နာရေးသင်း သိမ်းပိုက်ခဲ့လို့ ဒီနေ့အသင်းမြေနေရာနဲ့ ဆုလာဒ်တွေပေးခဲ့တယ်.....
၂၀၀၇ အရေးအခင်ဖြစ်ပြီးမှ ဥက္ကဌ အဖြစ်သူကောင်းပြုခံရတာ
ငါက တပ်ချုပ်ကြီးတို့ ခင်ညွန့်တို့ လက်ထက်မှာ အဖေ နဲ့ ငါက ရုပ်ရှင်ကောင်စီမှာ ဥက္ကဌ နဲ အတွင်းရေးမူ ဆယ်နှစ်ဆယ်မိုးမက တာဝန်ယူအမူထမ်းပြီး ဝါဒဖြန့်ရုပ်ရှင်ကားတွေ ရိုက်ပေးခဲ့တာ မင်းတို့ကျောင်းသားတွေ ကျဆုံးခဲတယ်လေ.....သူတို့ ငါကျေးဇူးတွေ ဘယ်တော့မှမေ့မှာ မဟုတ်ဘူ
မင်းတို့ ဒီမိုကျောင်းသား အမည်ခံတွေကို ထောင်ထဲအရောက်ပို့ပေးခဲ့လို.....ငါ့ ကိုကျေးဇူးတင်ကြရအုံးမှာ ငါ ကထောင်ထဲလောက်သာပို့တာ ငါ့ အကျိုးစီးပွားအတွက်.....ကချင် တို့ ကိုးကန့် တို့ သွားခိုင်းပြီး အသက်ပေးလှူမခိုင်ခဲ့ပါ
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေကိုလည် တို့ လင်မယားကူညီခဲ့တာ.....တို့ ကျေးဇူတွေရှိတယ် https://www.facebook.com/tharaphinyunt28942nt/photos/a.134403886736459.1073741826.134399830070198/406208472889331/?type=1&theater
နာရေးကူညီမူအသင်း(ရန်ကုန်) စတင်တည်ထောင်သူများမှာပါသည့် စာရေးဆရာ ဆရာဦးအောင်သင်း ကို တို့ လုပ်ကြံခဲ့တာ..... ခွေးပြေဝက်ပြေး အသင်းက ထွက်ပြေးသွားရတယ်
သန်းမြင့်အောင် တို့ နာရေးအသင်း မှာ ခု ဒုဥက္ကဌ ပေါ့ အဆင်းတွန်းလိုက်ထာ လူယုံသတ်လို့သေတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးပေါ့
လုပ်ကြံလို့အောင်မြင်တော့ တို့ ဆရာကြီးခင်ညွန့် က စာပေဆု သန်းမြင်အောင်ကို ပေးတယ် ..... သန်းမြင့်အောင် ဒီနေ့ ငါတိုနဲ့ပေါင်း လူတန်းစားပေါင်စုံ ကို အသုံးချတတ်လို့ နာရေးအသင်း စရောက်စဉ် သရက်သီးသနပ် ရောင်းခဲ့ရတဲ့ဘဝက ခုဆို အားလုံးက သူဌေးခေါ်နေရပြီ.....အသုဲံးချတတ်ရင် အရာရာကိုရတယ် https://www.facebook.com/yangonmediagroup/photos/a.335477406471186.83922.334119789940281/933842856634635/?type=1&theater
တို့ ဒီမိုပညာရေး ကျောင်းသားဆိုသူများကို တို့ နာရေးအသင်းမှာ ပြည်လုံကျွတ် အစည်းအဝေ ကျင်းပခွင့်ပေးခဲသလို .....တို့ လင်မယား ကျောက်ပတောင်ဖက်မှာ ရှေ့ က ဦးဆောင် ချီတက် ခေါင်းဆောင်မူ့ပြပေးခဲတယ်
ပြည်သူတွေက အသိအမှတ်ပြု့ အောင်.....အာဏာရှင်ကို တော်လှန်သူများပေါ့
မင်းတို့ ဒီမိုကျောင်းသားအမည်ခံတွေကို ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိတာက.....ငါ မိန်မ ဇီးကွက် တော်လှန်ရေးသမားအဖြစ် လူသိများပြီး NLD မှာ လွတ်တော်အမတ် ရွေးခံရဖို့များတယ်
ဦးဝင်းတင် ဈာပနမှာ ငါမိန်မဇီးကွက် အလောင်းနားကမခွာ ဒေါ်စု အသိအမှတ်ပြုအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်.....ဒါလဲ အသုံးချနည်းတမျိုး https://www.facebook.com/tharaphinyunt28942nt/photos/a.134403886736459.1073741826.134399830070198/445973432246168/?type=1&theater
ငါ ခု ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွား ရုပ်ရှင်မှာ ၁၈.၃.၂၀၁၅ နေ့ကစ ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွား အဖြစ်ပါဝင်ရိုက်ကူးနေပြီ.....ငါ ပုံ ကိုကြည့်ကြကွာ ဒီလိုအပြုံးမျိုး မပြုံပျော်ရတာကြာပြီး ပီတိဖြစ်နေတဲ့ အပြုံးပါ
ငါ့ ကို ထောင်ထဲအရောက် အပို့ကောင်းလို့ ကျေးဇူးရှင်တွေက ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွား ဆိုပြီး...... သူကောင်းပြုလိုက်ကြပြန်ပါပြီ
ဒီမိုကျောင်းသားဆိုသူတွေ ဝိုင်းရံသူတွေ အားပေးသူတွေ လမ်ပေါ်မှာရော လွတ်တော်ကြားနာပွဲမှာပါ ကျဆုံးသွာပြီး.....ကျဆုံးသွားပြီးဆိုကတဲက ဘာမှတောင်ဆိုလို့ မရနိုင်သလို ဘာလုပ်ပိုင်ခွင့်မှ မရနုိုင်ပါ
ငါ လုပ်ထာ ငါ ပြောတာတွေ တော်တော်မှန်နေတယ် ပါဝါပေါ့ကွာ ပါဝါ ဆေးသမာဆို ဆေးလိုက်တယ်ပေါ့.....ငါ က နာရေးသမားဆိုတော့ နာရေးလိုက်တယ်ပေါ့
အမေ အချိန်တန်ပြီ ပြောလိုက်ထာ.....အမေ သုံးရက်နားပြီး ဆေးရုံမှာဆေးစစ်ရတယ်တဲ့
ငါ့ အပျော်ရွင်ဆုံး အချိန်ဆိုလဲမမှာပါ ငါကတော့ အပြုံးနဲ့အောင်ပွဲခံနေပြီ.....အ သူခံကြရစတမ် ပေါ့ကွာ
ငါက ဘယ်ခေတ်ရောက်ရောက် အေးအေးဆေးဆေးဘဲ.....ဘယ်သူကိုမဆို အသုံးချ ခြေနဲ့နင်းပြီး မလိုရင်ကန်ချ လိုချင်သည့်နေရာ တက်လို့ရတယ်
Posted by Tha Ra Phi Nyunt at 4:37 PM0comments
စင်္ကြာမင်းလေး ကို စောင့်မျှော်နေသူများ
. စင်္ကြာမင်းလေး ကို စောင့်မျှော်နေသူများ
ယခုအခါ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်ကြီးကို ယုံကြည်စွာရှာဖွေနေသူများရှိသလို မိမိတို့ယုံကြည်ရာကိုအစွဲဖြင့် ကိုယ်ကွယ်ပသ ဆည်းကပ်စောင့်မျှော်နေသူများ ခေတ်တိုင်းမှာ နေရာတိုင်းမှာ တွေ့ ခဲ့ရပါတယ် ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကိစ္စမှာ အပေါ်ရံကြောလောက်သာဖတ်ခဲပြီး ဘာမှဝေဖန်သုံးသပ်မူ့ မလုပ်ခဲ့ပါ
သူ့ယုံကြည်ရာသူလုပ်ထာလို့သဘော ထားခဲ့ပါသည် ယုံကြည်သူများကတော့ တဗိုလ်တက် တဗိုလ်ဆင်း ခေါင်းလောင်းကြီးကို ဆက်လက်ရှာဖွေကြအုံးမှာ ဧကန်မလွဲ ဖြစ်ပါတယ် ယုံကြည်မူ့ ပါ.....
ထို့အတူ စင်္ကြာမင်းလေးကို စောင့်မျော်နေသူများကြားတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ နေခဲ့ရသော်လည် ဘာမှပါဝင်ပါတ်သက်ခြင်းမရှိ မသိသလိုနေခဲ့ပါသည်
ယုံကြည်သူများကတော့ ခေတ်တိုင်းမှာ စောင့်မျှော်နေကြလျှက်ပါ...
ဘိုးတော်ဘုရား အိမ်မက်မက်ရာ ငယ်စဉ်ကသူငယ်ချင်းဖြစ်သည် မောင်ရွေအောင် ခေါ် ပထမံဦးအောင် အများသိ ဘိုးဘိုးအောင် က မင်းသားအင်္ဂါ လက္ခဏာနဲ့ ပြည့်စုံချောမော လှပသောသတို့သားကို စစ်ကိုင်းမင်းသား နဲ့ ဆင်ဖြူရှင်မယ် တို့ နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်သွားသည်ဟု အိမ်မက်မက်ခဲ့ပြီး မွေးဖွားလာသူလဲ ဖြစ်ပါတယ်
၁၁၇၄ ခုနှစ်မှာ ပဒုံမင်း ခေါ် ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက်မှာ အိမ်ရှေ့ မင်း စစ်ကိုင်းမင်းသား အိမ်ရှေ့ မင်းသ္မီး ဆင်ဖြူရှင်မယ် တို့မှဖွားမြင်သော သားတော်ကလေးဖြစ်ပါတယ်
ပတိသန္တေတည်ကစလို့ ထူခြားဖြစ်စဉ်းများ ငလျှင်များစွာလှုပ်ခြင်း သစ်ဖြူပင်မှ ရေထွက်ခြင်း စသည့်အတိတ်ထူး နမိတ်ထူး အိမ်မက်ထူး များကြောင့် ဘုန်ကြီးသော စင်္ကြာမင်းလေးဟု လူအများယုံကြည် ခေါ်ဝေါ်နေခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်
မွေးဖွားပြီ ၇ ရက်မှာ အိမ်ရှေ့ မိဖုရား နတ်ရွာစံပြီး ဘိုးတော်မင်တရားကြီးက အလွန်ချစ်ယုံကြည်တော်မူပြီး မြစ်တော် စင်္ကြာမင်းလေးကို ညောင်းရမ်းမြို့ ကို အပိုင်စားပေးတော်မူလိုက်၍ ညောင်ရမ်းမင်းသားတွင်ခဲ့ပါတယ် ဘိုးတော်ဘုရား ဘယ်လောက်ချစ်သလဲဆိုရင် မြပုခက်ဝယ်ရန် ငွေတော် ၈ သိန်းထုတ်ပေးပြိး ယိုဒယားကိုသွားရောက် ဝယ်ယူစေခဲ့ပါတယ်
မင်းတုံးမင်း ယိုးဒယားဘုရင်း တို့ ဆိုတာ ပဒေသရာစ် အဆင့်
အနော်ရထာ ဘုရင့်နောင် တို့က ဧကရာစ်(Emperor) အဆင့်
စင်္ကြာမင်း က ထို့ထက်နယ်ပယ်ကြယ်ပြန့် ကြီးမာပါသည် စင်္ကြာရှင်မင်းဖြစ်လျှင် မေတ္တာရှင်ဖြစ်သွားကြပါတယ်
အာသောကမင်းကြီး ကို စင်္ကြာရှင်မင်းအဖြစ် အဆင့်သပ်မှတ်ပါတယ်
၁၂၀၀ ခုနှစ် တန်းခူးလပြည့်ကျော် ၆ ရက်နေ့တွင် ဘထွေးတော် သာယာဝတီမင်းလက်ထက်မှာတော့ တော်လှန်ပုန်ကန်ရန် ကြံစည်သည်ဆိုကာ အသက် ၂၇ ထဲမှာ ရှိနေသည့် စင်္ကြာမင်းလေးကို ကတ္တီပါရွှေအိတ်စွတ်၍ ရေဆိပ်တွင် ဖျောက်ဖျက်ကွက်မျက်တော် မူခဲ့ပါတယ်
သမိုင်အရသေဆုံးသွာပေမဲ့ ယုံကြည်မူ့တဘောင်များအရ ဘိုးဘိုးအောင် က ကယ်တင်သွားသည်ဟု အများယုံကြည်ခဲ့ကြပါသည်
စင်္ကြာမင်းလေးကို ရွှေကြက်ယက်အနီး ရေချသောခါ ငလျှင်ကြီးစွာလှုပ်၍ လေကြီးမိုးကြီကျ ရေတွင်းရေကန် သွေးအတိဖြစ် အတိတ်နမိတ်ကြီးများလည်းပြ ဖွားဖက်တော် ရွှေလရောင်မြင်းလည်း ပျောက်ကွယ်သွားကြောင်း နဲ့ မြင်းခံတော်မောင်ညှိ စစ်ကိုင်တောင်ရိုး မင်းကွန်အရပ်ရှိ စင်္ကြာမင်းလေး တည်ထားကိုယ်ကွယ်သော အာလိန်ငါးဆင့် မြသိန်းတန်စေတီသို့ သွားရောက် ရ ရက် တရားစခန်ဝင် ဦးပုဒ်သီလစောင့်စဉ် စင်္ကြာမင်းလေး ရွှေလရောင်မြင်းကို စီး၍ပေါ်လာပြီး မောင်ညှိ ငါမသေ ရသေ့ဦအောင် ယူဆောင်သွားသဖြင့် ရဇိတ တောင်တန်းမှာ စံမြန်နေကြောင်းပြလို့် မောင်ညှိ စိတ်အေးသွာတယ်တဲ့
သာယာဝတီမင်းက ကြားပြီး စင်္ကြာမင်းလေး နတ်စိမ်းဖြစ်၍ လာပြတာမဟုတ်လားဟု မောင်ညှိ ကိုမေရာ နတ်စိမ်းမဟုတ်ပါ စင်္ကြာမင်းလေး ကိုယ်တော်တိုင် ရွှေလရောင်မြင်းစီး၍ လူကိုယ်တိုင်လာကြောင်းပြောလို့ ဘုရင်သဘောနဲ့ မတိုက်ဆိုင်တာကြောင် မောင်ညှိ ထပ်၍အသတ်ခံရပြန်ပါတယ်
ပြည်သူပြည်သားတွေ မူးမတ်တွေက ချစ်ကြသော်လည်း စင်္ကြာမင်းလေအကြောင်းမပြောဆိုဝံ့ကြ ဖြစ်သွားရပါတော့တယ်
ဒါပေမဲ့ စင်္ကြာမင်းလေး ကွက်မျက်ခံရပြီး အောက်ပါတဘောင်ကြောင့် ခေတ်အဆက်ဆက် စင်္ကြာမင်းလေး ကို ယုံကြည်စွာစောင့်မျှော်နေကြလျှက်ပါ
တဘောင်များ တွက်ချက်မူ့တွေအရ ကုန်ဘောင်မင်းဆက် ၁၅ ဆက် ရှိရမည်လို့ ယုံကြည်မူလဲ ရှိကြပါတယ်.....ဒါကြောင့် နောက်မင်းဆက်ဟာ ၁၂ ဆက်မြောက် စင်္ကြာမင်းလေး သာဖြစ်ရမည်ဆိုပြီး စောင့်နေကြတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါသည
် ဆင်ဖြူမသား ရေသို့လား
ဘိုးတော်ကား တောင်တန်းမြင့်က မျှော
ရွှေဆက်တော် လာမည့်လမ်း နှင်းရည်နှင့် ဖျန်း။
တပေါင်းလရာသီ ဘောင်ဘီ နဲ့ ဖွေးဖွေး
ဓါးလွယ် ရွှေကွပ်နှင့် မြေညွတ်အောင်
အင်္ဂလိပ်အုပ်စိုးစဉ်မှာလဲ မင်းလောင်းမျှော်တဲ့ ဘိုးဘိုးအောင် စင်္ကြာသိုက် သီချင်းများပေါ်ပေါက် သီးဆိုခဲ့ကြပြီး ပြည်သူလူထုကို အာပေးအားမြောက်ပြုခဲ့ကြပါတယ်
စင်္ကြာသိုက် သီချင်းမှာဆိုရင် ရုပ်ရှင်မင်းသား အဆိုတော် ခင်မောင်ရင် သီဆိုခဲ့လို့ "တို့ဗမာ ဂုဏ်ရောင်ထွန်း " အသံဟာ တနှိင်ငံလုံး ပြန့်နှံခဲ့ပါတယ်
တို့ဗမာ ဂုဏ်ရောင် ထွန်းပြောင်တော့မည်
စင်္ကြာသိုက် တဘောင် စာဆိုပြောင်သည်
ဘိုးတော်ရင်သွေး အစစ် ရောက်ချိန်တန်ပြီ
အင်းကို ဟင်္သာဆင်းမည် ဆင်းရင် လေးနဲ့ ခွင်းမည်
ထိုမုဆိုးကို ထီးရိုးရိုကမည် ထီးရိုးကို မိုးကြိုးပစ်မည် တဲ့ စာရှိပါသည်
၁၃၀၁ ခု က စ၍ ရတနာ ဆိုတာ လိုရာရနိုင်သည်......
ကျွန်တော် မဆလခေတ်အစလောက်မှာ စင်္ကြာမင်းလေး ကို စောင်မျှော်နေသူများ အကြောင်း စသိခဲ့ရတာပါ .....
ဖြစ်ပုံကဒီလို တောမြို့ လေးက ရန်ကုန်ကို တက်လာကာစ လူငယ်ဘဝမှာပါ ပြည်လမ် ၆ မိုင်ခွဲ ကျော်ကျော်လောက်မှာ ရန်ကုန်ဘက်က မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်လာရင် ညာဘက်ကိုချိုးသွားတဲ့ လမ်းရှိတယ်
ခု ပါရမိလမ်ခေါ်သည့်လမ်းရှည်ကြီး ချော်တွင်းကုန်ဘက်ရောက်ပြီးရင်း ကမ္ဘာအေးဘုရာလမ်ပါ ပြည်လမ်းက ညာဘက်ကွေ့ ဝင်လိုက်ထာ နဲ့ ညာဘက်ကိုထပ်ချိုးသွားသည့် ခု အခေါ်မေခလမ်းကို တွေ့ ရမှာပါ ဦးနေဝင်း တသက်တာနေသွားခဲ့တဲ့ အင်ယားကန်ဘောင်က အစိုးရအိမ်ကြီးရှိပါတယ်
အမှန်က တပ်ကစစ်ဦးစီချုပ်တွေနေဖို့ အစိုးရငွေနဲ့ ဆောက်ထားတာပါ နောက်ပိုင်းပြင်ဆင်တာတွေလဲ အစိုးရအသုံးစရိတ်တွေနဲ့ပါဘဲ အိမ်အသုံးအဆောင်အားလုံးလဲ အစိုးရငွေနဲ့ပါဘဲ
နောက်ပိုင်း ကျွန်တော်အစိုးရအလုပ် ဝင်လုပ်တော့ လေဆိပ်နဲ့ စာတိုက်က နိုင်ငံခြားကလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်ရတဲ့အလုပ်ပါ ကျွန်တော်ထုတ်ရင် အကောက်ခွန်က ဖွင့်ဖေါက်စစ်ဆေးခွင့် မပြုရပါ ဦးနေဝင်း အိမ်တော်ကလဲ သူတို့ပစ္စည်း မဖွင့်ဖေါက်ချင်ရင် ကျွန်တော်ထုတ်ပေးရပါတယ် ထုတ်ပြီးရင် အိမ်တော်ဝန် ဗိုလ်မူးကြီးစိန်ဘန်း လာယူပါတယ်
ထိုစဉ်က ဥပဒေအတိုင်း လိုက်နာကြပါတယ် အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေး ပြည်သူရဲ တို့ကိုလဲ ထုတ်ပေးဘူးပါတယ် အာဏာပါဝါနဲ့ မလုပ်ကြပါ
ပါရမီလမ်းထဲဝင် ဦးနေဝင်း နေတဲ့ မေခလမ်းကျော်တာနဲ့ မကြာခင် ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ထိုစဉ်က လမ်းဘေးမှာ စိန်ရောင်ခြည်ဘုရား စေတီလေးတဆူရှိပါတယ် (မဆလခေတ်မှာ လမ်ချဲ့ လို စေတီမရှိတော့ပါ) ထိုစေတီနဲ့ ကပ်လျှက်ခြံဝန်ကျယ်ကြီးရှိပါတယ်
ကျွန်တော်ရောက်သွားတာက အဲဒိခြံကျယ်ကြီးထဲကိုပါ.....တရက်အလည်သဘော ရောက်သွားတာပါ အဲဒိခြံဝန်းကျယ်ကြီး နဲ့ စေတီလေးကျော်လိုက်ရင် ပါရမီလမ်း ညာဘက်ခြမ်မှာ အမေရိကန်သံရုံးဝန်ထမ်များ၏ အာကစားကလပ် အင်ယားကန်ဘေးမှာရှိပါတယ် ရှေ့ ဆက်သွားရင် ချော်တွင်းကုန် ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းရောက်ပါပြီ
ခြံရှေ့ မှာ စေတီရှိတဲ့ ခြံကျယ်ကြီးထမှာ ၂ ထပ်တိုက် ပေ ၃၀ ပေ ၅၀ ရှိမည့် ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန် ဆောက်ထားတာပါ ခြံထဲရှောက်ကြည့်ရင်နဲ့ ဘယ်သူမှမရှိလို့် တိုက်တခါးကလဲပွင့်နေ အထဲကိုဝင်ကြည့်ရင်းနဲ့ အော်ထပ်က ဟာလာဟင်းလင်ကြီးပါ နောက် အပေါ်တက်တဲ့လှေခါးကနေ အပေါ်ထပ်ရောက်သွားပါတယ်
အမှန်ကလူငယ်ဘဝ စူးစန်ချင်လို့ပါ ဘာရည်ရွယ်ချက်မှ မရှိခဲ့ပါ လှေခါးဆုံး အပေါ်ထပ်ရောက်ထာနဲ့ ထူးဆန်းတာတွေ တွေ့ ရတော့တာပါဘဲ
စတွေ့ တာက ချပ်ဝတ်တန်ဆာနဲ့ စစ်သားရုပ်တွေ ဓါးတွေထမ်းလျှက် နောက်ထိုင်မသိမ်း အင်းကျီဝတ် ရှေ့ခေတ်မိန်ကလေးများ ရှေ့ ဆက်တော့ ရှေ့ ခေတ်မူမတ် ဝန်ကြီး စစ်သူကြီးအဝတ်အစားများနဲ့ လူတရပ်ခန်ရှိ လူနဲ့တူတဲ့အရုပ်တွေ ရွှေငွေချထားတဲ့ သလွန်ညောင်စောင်တွေ သားမွေးမှိယဒ်ကစ ဓါးလှံ ရှေ့ ခေတ်မင်းအသုံးအဆောင်တွေကိုတွေ့ ရပြီး
ရှေ့ ဆုံးက ပလင်ပေါ်မှာ သံလျှက်ကိုင်၍ မင်းသားတပါးထိုင်လျှက်ပုံပါ မင်းသားထိုင် ပလင်ရှေ့ မှာ ငှက်ပျောပွဲ အုံးပွဲ သစ်သီး ပန်မန်များနဲ့ ပသထားတာတွေ့ ရပါတယ်
ကြည့်နေရင်းနဲ့ အားလုံးအသက်ရှင်လာသလား ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ပြီ ကြောက်စိတ်ဝင်သွားမိပါတယ် ငယ်ရွယ်စဉ် တယောက်ထဲဖြစ်နေလို့လဲ အံသြခြင်း နဲ့အတူမင်သက်မိသွားလို့် ဖြစ်သွားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်
နာနာဘာဝနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ကိုယ်ရောင်ပြတာ တခါမှမတွေ့ ဘူးပါ ငိုသံတွေကြားတာဘဲရှိခဲ့ဘူးပါတယ် ရွှေဂုံတိုင်မိးပွိင့်က NLD ရုံးဘက်လာရင် ညာဘက်ခြမ်မှာ အနည်ငယ်အဝင်နား တောင်ပေါ်မှာ မဆလခေတ်က မေ့ဆေးဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာဦးစိန်လှိုင် နိုင်ငံခြားကပြန်လာပြီ နိုင်ငံခြားစတိုင် တိုက်အိမ်ဆောက်ပါတယ် မလောက်လို့ အစိုးရထံကငွေချေပြီဆက်ဆောက်တယ် အင်မတန်ကောင်းတဲ ဗိုလ်ဆန်ဆန်တိုက်အိမ်ပါ မဆလခေတ်ကုန်ခါနီးလေးမှာ အစိုးရအတိုးဆက်မပေးနိုင်လို့ ရောင်းလိုက်ရတယ်
ဒီဘက်ခေတ်ရောင်းရင် အများကြီရမှာ အဲဒီအိမ်မှာ နွေရာသီကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအိပ်တုံး တောင်အောက်ထဲက ငိုသံတွေကြားရတယ်
နောက်တခါ ထိုင်းဝမ်မှာ ဂျပန်ခေတ် ကင်ပေတိုင်တွေ ရုံးလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာ ခုစက်ရုံးလုပ်ထားပြီ အိပ်ခန်းရလို့ အိပ်ထာ ခေါင်းရင်းနံရံထဲက ငိုးသံတွေ မကြာခဏကြားရတယ်
အဲဒိစက်ရုံမှာဘဲ ထမင်းစားခန်းလုပ်တဲ့ ဟောခန်းကြီးရှိတယ် ရှေ့ ဆုံးမှာ ဗုဒ္ဒဘုရားစဉ်လဲရှတယ် TV ထားပေးလို့ ထိုစဉ်က ကမ္ဘာဘောပွဲတွေ ညတခါတရံ တယောက်တည်းကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်
တနေ့တော့ ကျွန်တော်တို့အထဲက အသက် ၁၇ နှစ်လူငယ်တယောက် အဲဒိဟောခန်းထဲက ဘီလီယက်ခုံမှား ညဘက်ဘီလီယက် တယောက်ထဲထိုးနေစဉ် ထိုးလိုက်သမျှ ဘီလိယက်အလုံးတွေဝင်သွားတယ်တဲ့
နောက်ဆုံး၂ လုံးရှိတော့ တလုံးကိုထိုလိုက်ထာ နောက်တလုံးကိုထိပြီး တွင်းဝင်သွားရာ ကြောက်ပြီး ဘီလိယက်ထိုးတံကို ခုံပေါ်ပြစ်လိုက်ရာ ထိုးတံနဲ့နောက်ဆုံး လက်ကျန်တလုံးထိပြီး ဝင်သွားတော့ ကြက်သီထကြောက်ပြီး ထွက်ပြေလာတယ်....
ထိုစဉ်က အဲဒိ ၂ ထပ်တိုက်ကြီးပေါ်မှာ ဘာကြောင့် ရှေ့ ခေတ်မင်းခန်းမင်းနားတွေ သလွန်ညောင်စောင်းကစ မင်းမြောက်တန်ဆာတွေ ဘုရင်ခေတ်အသုံးအဆောင်တွေ ရှိနေရသလဲဆိုတာ မသိခဲ့ပါ
နောက်မှ ထိုအသိုင်းအဝိုင်းမှာ အနေကြာလာမှ အကြောင်းစုံးသိခဲ့ရတာပါ
အမှန်က စင်္ကြာမင်းလေး စောင့်နေသူများဟာ ပတီကိုမပြတ်စိတ်ကြတဲ့ ပတီးဂိုဏ်လဲဖြစ်နေတာတွေ့ ရပါတယ်
ဒါပေမဲ့ ထူးဆန်းတာက တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ် မဆလခေတ် ဝန်ကြီး ဝန်ကလေး ဗိုလ်မူကြီးအဆင့် ရှိသူတွေပါဝင်နေတာပါဘဲ
ပါရမီလမ်းထဲက ခြံကြီနဲ့တိုက်ဆိုရင် ရေတပ်အငြိမ်စား ဗိုလ်မူကြီးတင်သိန်လူ ပိုင်တာပါ အစိုးရထံအပေါင်ခံထားခဲ့ပြီး မရွေးနိုင်လို့ ဆုံးတော့မှာကို သူကိုယ်တိုင်က အဖွဲဝင်ဖြစ်လို့ စင်္ကြာမင်းလေး စောင့်နေသူများအဖွဲက အစိုးရထံမှရွေးယူ အသုံးပြုခဲ့တာပါ
အဖွဲ့ ဝင်များ တပါတ်တခါ အစည်းအဝေး လုပ်ကြတယ် ဘာတွေလုပ်သည်ကိုတော့ စိတ်မဝင်စားလို့ မသိခဲ့ပါ အစည်းအဝေး လုပ်တိုင်းကောင်းကောင်း စားရတာတော့အမှန်ပါ
အဖွဲဝင်ခေါင်းဆောင် တဦးဆိုရင် ထိုစဉ်က ကုလသမ္မက အထွေထွေအတွင်းရေးမူချုပ် ဦးသန့် နဲ့ ရင်းနှီးမူရှိလို့ ဦးနေဝင်း က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမ္မကခေါင်းဆောင်ကိုယ်စားလည် သွားလုပ်ဖို့ခန့်ပါတယ်
ထိုစဉ်က ဒုဝန်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ ဗိုလ်မူကြီးလှဖေ(အဆိုတော်ပြည်လှဖေ)က အကိုကြီး ကုလသမ္မကကို ကိုစလှုယ်ခေါင်းဆောင် သွားလုပ်ရမယ် လာ၍ခန့်စာပေးတာကို စင်္ကြာမင်းလေး အဖွဲဝင်များက အချိန်မကျသေးဘူး မသွားသင့်သေးဘူးဆိုလို့ မသွား အလုပ်ကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်
ပါရမီလမ်း စင်္ကြာမင်းလေး အဖွဲ့ ပိုင်တဲ့ ခြံကြီးရှေ့ က တချိန်က စိန်ရောင်ခြည်ဘုရား စေတီလေးးကို အဖွဲ့ကနှစ်စဉ် ဘုရားပွဲကျင်ပနေခဲ့ကြတာ လမ်းတိုးချဲ့ မည်ဆိုပြီး အဖျက်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်
နိုင်ငံသားအားလုံး ပြည်သူပြည်သားအားလုံး တိုင်ပြည် နဲ့ လူမျိုး တိုးတက်သာယာ ဝပြောကြစေဖို့ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန် ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်နဲ့ ခေတ်တိုင်းမှာ လုပ်ဆောင်နေကြတာပါဘဲ။
Posted by Tha Ra Phi Nyunt at 5:58 PM0comments
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးကို သတ်သည်ဟုဆိုကာ မြန်မာနှစ်ဦ...
Posted by Tha Ra Phi Nyunt at 3:18 AM0comments
ရိုးသားသည့် ခေါင်းဆောင် တကယ်လိုအပ်ပါသည်
ရိုးသားသည့် ခေါင်းဆောင် တကယ်လိုအပ်ပါသည်.....
စစ်အာဏာရှင် အသီးသီးလက်ထက်မှာ တာဝန်အရရှိသလို မိမိတို့ကောင်းစားဖို့ ခိုင်းသမျှပါဝင်လုပ်ပေးခဲ့ပြီး လူလယ်လုပ်သူတွေများခဲ့ပါတယ်
ဒီနေ့မှာဒီမိုအမည်ခံပြီး လူကောင်းလုပ်ဖို့ကြိုးစား ဒီမိုနဲ့ပေါင်းပြီး နေရာယူဖို့ ကြံနေကြသူတွေလဲ သူတို့ပါဘဲ
ဒီမိုအမည်ခံ နိုင်ငံရေးသမားအမည်ခံပြီး အာဏာရဖို့ တိုင်းပြည်ဘာဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူဘာဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံခြားကိုဖိအားပေးခိုင်း စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မူလုပ်ခုိုင်း .....တကယ်ခံခဲ့ကြရတာက ရိုးသားတဲ့ပြည်သူတွေပါ
ပြည်သူကယုံကြည်အားကိုးလို့ အားပေးထောက်ခံခဲ့သော်လည်း ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ခဲ့ အပြောနဲ့သာ လေထဲမှားပျောက်သွားခဲ့လို့ ပြည်သူတွေသာ နာပေါင်းစုံနာခဲ့ကြရပြီးပါပြီ
ရိုးသားတဲ့ပြည်သူတွေက ခံရပါများလို့ နလံမထူနိုင် စား ဝတ် နေ ရေး ကိုသာလုံးပန်းနေရလို့ ဘာမှမသိတာ အမှန်ပါ ခုအချိန်မှာ တကယ်လိုအပ်နေတာက တိုင်းပြည်သာယာဝပြောဖို့ ပြည်သူတွေ စား ဝတ် နေ ရေး ကစ လူမူအရေးတွေ ပြေလည်ကောင်းမွန်စေဖို့သာ လိုအပ်ပါတယ်
တချိန်ကဘာဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ ခုခါမှာတကယ်ရိုးသာစွာ လုပ်ဆောင်ပြနိုင်သူသာလိုအပ်ပါတယ်
တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုရင် တောင်ရန်ရင်တောင်းရန်းရမှာပါဘဲ အောက်ကြို့ ရင်အောက်ကြို့ ရမှာဘဲ နှစ်များစွာ ပျက်စီးဆိုဝါးသွားသည့်နိုင်ငံကို တကယ်အရှိအတိုင်းမြင်ပြီး အပေါ်ရံကြောလောက် ပြောကြဆိုကြရုံနဲ့ ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ မလွယ်ပါ လက်တွေ့ တကယ်လုပ်ကြည့် လုပ်နေမှ လွတ်မြောက်မှာပါ
တိုင်းပြည်ကို ရန်သူကဝိုင်းဝန်းသိမ်းပိုက်ပြီး ရန်ကုန် တခုသာကျန်ခဲ့စဉ်က တိုင်းပြည်ကိုကယ်ဖို့ တိုင်းပြည်အသီးသီးသွားပြီး အောက်ကြို့ ခံ လက်နက်တောင်းရန်းခဲ့ရသူတွေ တိုင်းပြည်မှာရှိခဲ့ဘူးပါတယ်
ယခုလည်း တိုင်ပြည်တည်ဆောက်ဖို့ ရိုသားမူနဲ့ လုပ်ဆောင်နေရတာကို အပျက်သဘော ဝေဖန်ရှုံချခံပြီး လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်နေရတဲ့ ယနေ့ ဒုက္ခအပေါင်းခံစားနေရသည့် ရိုးသားသည့် အများပြည်သူများကို ကိုယ်စားပြုသည့်
သမတကြီး ဦးသိန်းစိန် ကို အောင်မြင်ပါစေကြောင်း ကြိုဆိုလိုက်ပါသည်.....
Posted by Tha Ra Phi Nyunt at 3:16 AM0comments
ကြက်ခြေနီ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း အကျိုးတရား (မြတ်စွယ်တော်ပွဲ အမှတ်တရ)
ကြက်ခြေနီ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း အကျိုးတရား.....
(မြတ်စွယ်တော်ပွဲ အမှတ်တရ) မိမိမွေးရပ်မြေမှာ ကြက်ခြေနီ လူမူရေးအလုပ်ကို ၇-နှစ်နီးပါး ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ထိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အကျိုးတရားများကို ယ္ခုခံစားနေရသည်ဆိုရင်.....
ရန်ကုန်-ပြည် ကြားကမြို့ ငယ်ကလေးတမြို့  ဖြစ်ပေမဲ့ ဈေးရုံကြီးများ ရုပ်ရှင်ရုံများ လမ်းများ ကျောင်းများ အိမ်ခြေတိုက်တာတွေနဲ့ အတော်အသင့် သာယာကောင်မွန် ကျယ်ဝန်းစည်ကားတဲ့မြို့ လေဖြစ်ပြီး အရပ်ရပ်က လယ်သမား ယာသမား နွားကုန်သည်တွေရောက်ရှိ စည်ကားတဲ့နွားဈေး တပါတ်တခါ ရှိသည့်မြို့် ပါ မြန်မာပြည်အနှံရောက်ခဲ့ဘူးလို့ မြို့ ကလေး၏ ခန့်ညားမူကို ပိုသိခဲ့ရပါသည်....
တနှစ်တခါ မြို့ တွင်းလှည့်လယ်ကျင်းပသည့် မြတ်စွယ်တော်ပွဲ က အစည်ကားဆုံးပါ
မြို့ ကို အလယ်က ကားလမ်း မီးရထာလမ်းက တောင် မြောက် ခွဲခြားထားတယ် တောင်ဘက်မှာ မြို့ ကပိုရှည် ရပ်ကွက်တွေများပြီး မြောက်ဘက်မှာတို၍ ရပ်ကွက်နည်းပါတယ် ခုအခါမှာတော့ မျြိ့ ၏အရှေ့  နဲ့ အနောက် ဘက်တွေမှာ ရပ်ကွက်သစ်တွေရှိနေရပါပြီ၊
ကျွန်တော်နေတာက မြို့ မြောက်ဘက်က မြို့ စွန်ကျသည်နေရာ အတွင်းလမ်းမှာပါ မြို့ လယ် ရန်ကုန်-ပြည်ကားလမ်းမကို မီးရထားလမ်းဖြတ်ကျော်သွားရင် ၁၅ မီးနစ်ခန့် သွားရတယ်
အတွင်းလမ်မှာမွေး အတွင်းလမ်းမှားကြီးပြီး အနှစ် ၂၀ ခန့် နေခဲ့ရာမှာ ကျောင်းကြက်ခြေနီမှာ ၇-နှစ်ခန် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်
အတွင်းလမ်မှာက လယ်သမား ခြံသမား နွားမွေးခြံများ လက်လုပ်လက်စား ယာဉ်မောင်း ယာဉ်နောက် ဆိုက်ကားနင်း စရိုက်ကြမ်းသူ များပါတယ် လမ်းကတော်တော်ရည်ပြီး ၂-မိုင်ခန့် ရှိပါမယ်
မူလတန်း ကျောင်းစတက်တော့ ၃၈-လမ်း ဆရာမကြီ ဒေါ်ခင်စော ကျောင်အုပ်လုပ်သည့် မူလတန်းကျောင်းမှာပါ တပါတ်သာနေခဲ့ရတယ် ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်စော သူ့ ခင်ပွန်း ဆရာကြီး ဦးထွန်တင် (အထက) တို့နဲ့ မိဘများကအလွန်ခင်မင်ကြပါတယ်
ဒါပေမဲ့ ကျောင်းနေဖို့ အစစအရာရာ တာဝန်ယူထားသည့် မွေးစားမိခင် အလယ်တန်းကျောင်းအုပ် ဆရာမကြီး ဒေါ်သန်တင် က ပြောင်ခိုင်းလို မီးရထားလမ်းဘေးက အလယ်တန်းကျောင်းကို မူလတန်မှားတက်ခဲ့တယ် မူလတန်မှာ ဆရာမ ဒေါ်အေးမေ ဆရာမ ဒေါ်ကြည် ဆရာမ ဒေါ်ခင်မြင့် ဆရာဦးသိန်အောင်(ပန်းချီ) ဆရာဦးစိုးတင့် ဆရာတင်မြင့်(ယူနွတ်) လေးတန်မှာသင်ခဲ့တဲ့ ဆရာကြီး ဦးဘညွန့် က အမေတို့သင်ခဲ့ဆရာပါ စာမရရင် ဆရာကြီးအတန်းရှေ့ မှာ နရင်းကိုထရံနဲ့ပြေးဆောင့်အောင် ရိုက်ပါတယ် ဆရာကြီးပင်စင်ယူပြီ ၁၁-လမ်းမှာ စာရေးကရိယာဆိုင်ဖွင်တော့ အားပေးခဲ့ပါတယ် လေးတန်းအောင် ၅တန်းတက်တော့ ဆရာကြီဆိုင်က OXFORD LONDON ထုတ် ကွန်ပါဘူး ဝယ်သုံးခဲ့တယ် ဆရားကြီးဆိုင်က ကျောင်နဲ့ပါတ်သက်ထာ လိုအပ်သလောက်ဝယ်ပါတယ် ငွေကိုတော့ ဆရာမကြီးဒေါ်သန်းတင် က နောက်မှရှင်းပေးပါတယ် မမေ့နိုင်တဲ့ဆရာများပါ
၄တန်းအောင် မှ ကင်ထောက်ကိုစဝင်ပါတယ် ကင်ထောက်သင်တန်းတက်ခဲ့ရပါသေးတယ် ကြိုးခြည်နည်း အဝတ်တဲထိုးနည် တွေပါပါတယ် ဘောင်ဘီတို အင်ကျီလက်တို လယ်ပင်မှာ အဝတ်စတခုကို ဂွင်းလုံးလေးထိုးပြီပါတ်၍ ဂွင်ကထွက်တဲ့အစ ၂ စကိုကို ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ ခွဲချထားပါတယ် အလကမှာ ကင်ထောက်ကို ဆရာဦးစိန်အုပ်(ဘိုကုန်) ဆရာဦးစိုတင့် တို့ ဦးစီးပါတယ် အထကမှာတော့ဆရာကြီး ဦးထွန်တင် ဦးစီးပါတယ် ကင်ထောက်မှာ တလလောက်လုပ်ပြီ ဘာစိတ်ကူးပေါက်သည်မသိ ကြက်ခြေနီပြောင်းလိုက်ပါတယ်
ကိုယ်ကိုကိုယ် သိလို့နေမယ် ၇ လနဲ့မွေး အမေကနို့မထွက်လို့ အိမ်နားကအဒေါ်ကြီးတဦး နို့ကိုစိုခဲ့ပြီ မွဲခြောက်ခြောက် ပိန်ရှည်ရှည်နဲ့ ပေါင်တည်မှာနေခဲ့စဉ် ပေါင် ၁၀၀ မကျော်ခဲ့ပါ ရန်ကုန် ရောက်ပြီး နောက်နှစ်ပြန်တော့ ပေါင် ၁၂၀ ကျော်ခဲ့ နောက် ပေါင် ၁၈၀ အထိဖြစ်ခါ ခုခါမှာတော့ အစားကိုလျှော့စာပြီး ပေါင် ၁၆၀ ကို အမြဲထိန်းထားပါသည်
တခုတော့ပြောရအုံးမယ် ဖခင် မိခင် တွေက ၂လမ်း(ဖေါင်သူကြီးလမ်း) မှတ်တိုင်လမ်း (အုတ်ဖိုရပ်ကွက်) ၃လမ် နဲ့ ဘုရားကြီးလမ်းက တန်ရားကြီမှာ အစွန်ဆုံး ၃ လမ်း မီးရထားလမ်းဘက်က ပေါ်ထပ်မှာ နှစ်များစွား နောက်ဆုံးနေခဲ့ကြတာ မြို့ လယ်မှာအမြဲ နေသွားပေမဲ့ ကျွန်တော်တခါမှ လိုက်မနေဘူးပါ တနှစ် တခါ နှစ်ခါခန့် သာသွားဖြစ်ပါတယ်
အမေ ဆိုရင်လဲ အတွင်းလမ်းကို နေ့စဉ် ညနေခင်းလမ်းလျှောက်လာပါတယ် မှောင်စပျိုးရင် ပြန်ပါတယ် ဖခင် ကတော ကျွန်တော်အဆော့ အလယ်များ စာမကျက်ထာကြားရင် ခဏတဖြုတ် လာဆူပြီးပြန်ပါတယ်
အတွင်းလမ်းမှာ အမေ့အမ အပျိုးကြီးများနဲ့ နေရတဲ့ အင်မတန်လွတ်လပ်တဲ့ ဘဝပါ ကျောင်ကပြန် လွယ်အိတ်ပြစ်ချပြီး လမ်းထဲထွက်တော့ဒါပါဘဲ အဲဒီလွတ်လွတ်လပ်လပ် နေတဲ့အကျင့်တွေက ခုထိရှိတုံးပါ
ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ ရောက်တော့ ဖတ်စ်အိတ် ကြက်ခြေနီသင်တန်း ဆေးထည့်နည်း အရိုးကျိုးရင် ကြတ်စည်းနည်း လူနာကိုထမ်စဉ်မပါဘဲသယ်နည်း ထမ်စဉ်နဲ့သယ်နည်း အသက်ပြန်ရှူအောင်လုပ်နည်း စစ်ရေပြချီတက်နည်းတွေသင်ရပြီး အောင်လက်မှတ်ရခဲ့ပါတယ်
အလကကျောင် အပေါ်ထပ်ဟောခန်းကြီးထဲမှာ နှစ်စဉ် ဆုပေးပွဲ အောင်လက်မှတ်ပေးပွဲတွေကျင်းပပါတယ် ပညာရေနဲ့ပါ ထူးချွန်လက်မှတ်မှမရခဲ့ ကြက်ခြေနီအောင်လက်မှတ်နဲ့ အတန်တက်မှန်ကြောင်းအောင်လက်မှတ်ရခဲ့ဘူပါတယ်
ပညာရေးမှာ ထူးချွန်လက်မှတ်မရခဲ့ပေမဲ့ အတန်တက်မှန်လက်မှတ်ရခဲ့တာဟာ မိမိလုပ်ရမည်အလုပ်ကို ရိုသေတန်ဖိုထားလို့ပါ ဘဝထဲ လုပ်ငန်းခွင်ထဲရောက်သည့်အခါ မိမိလုပ်ရမည်တာဝန်ကို ရိုသေတန်ဖိုးထား ကြေပြွန်အောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့် ဘဝကံကြမ္မာအရ ခဏခဏ ပြောင်းရပေမဲ့ လုပ်ခဲ့သည်လုပ်ငန်းတိုင်း အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်
အလကမှာ နှစ်စဉ် လေ့လာရေးခရီးထွက်ကြပါတယ် ရန်ကုန် မော်လမြိုင် ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား မော်လမြိင် မုဒုံကန်တော်ကြီး ကျိုက်ခမီရေလယ်ဘုရား ဆက်ဆဲကမ်ခြေ ဘက်နဲ့ ပြည် မကွေး ပုဂံညောင်ဦး ပုပ္ပါး ရွှေစက်တော် ဘက်တို့ကိုပါ
ရန်ကုန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ဆေးရုံးကြီးနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်က ဗဟိုအမျိုးသ္မီအထက်တန်ကျောင်းမှာ တည်ခိုခဲ့ကြရတယ် အဲဒိကျောင်းက ကျောင်အုပ်ဆရာမကြီး နဲ့ ဆရာမကြီးဒေါ်သန်းတင် က သူငယ်ချင်တွေ ဖြစ်ကြလို့ပါ
ဆေးရုံးကြီ၏ ဘေးမှားလမ်းကျော်ရင် ထိုစဉ်က အလွန်စည်းကားတဲ့ ရန်ကုန်ညဈေးပါ ခု ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသစ်နဲ ကွက်လပ်နေရာပါ တည်သည်ကျောင်းတဘက်လမ်ကျော်ရင် ခရိယန်ဘုရားကျောင်ပြီးရင်း စကော့ဈေး ခေါ် ဗိုလ်ချုပ်ဈေးပါ အင်ဗွိုင်းမှား ပြတဲ့ သိပ္ပံပြပွဲကို လေ့လာကြည့်ရှု့ ကြရပါတယ်
အင်းဗွိုင်းက တည်းသည်ကျောင်း နောက်ဘက်မှား ကျောင်းနောက်ရောက်ထာနဲ့ ဦးဝိစာရ ပျံကျရပ်ကွက်ကြီးကိုတွေ့ ရမှာပါ အားလုံးတဲအိမ်များဖြစ်ကြပြီး လမ်းကျဉ်ကလေးတွေနဲ့ပါ ခုဦးဝိစာရ တိုက်ခမ်းအိမ်ရာ တည့်တည့်သွားရင် ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းပါ ကွေ့လိုက်ရင် ဦးဝိစာရလမ်းပါ ပျံကျရပ်ကွက်ကြီးကျော်တာနဲ့ ဂျူဘလီဟော မိုင်ဒါကွင်း အနီ အင်ဗွိုင်းမှားသိပ္ပံပြပွဲပါ မှတ်မှတ်ရရရှိနေတာက ရီမူ့ကွန်ထရိုးနဲ့ ရေပေါ်မှား သင်္ဘောငယ်ကို မောင်းပြတာပါ
ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ ကလဲ လေ့လာရေးခရီး အမြဲထွက်ပါတယ် တခါ ပြည် နိဗ္ဒိန်နတောထဲကို လေ့လာရေးခရီးထွက်ပါတယ် ဖန်ခါးသီးအလွန်ပေါတဲ့တောပါ မိုးရွာမှရေကျလာတဲ့ ရေကျချောင်းလေးတွေများပါတယ် ကင်းခြေများအရှည် ကင်မီးကောက် အင်ဆက်ပိုး တော်တော်များတဲ့တောပါ ကညွတ် ဆိပ်ဖလူး တို့စာလို့ရတဲ့ ဟင်းသီးဟင်ရွက်တွေပေါပါတယ် တောတွင်မှား ဘုရားကျောင်းကန်ပေါပြီး မယ်သီလရင် အများနေကြ၍ မယ်သီလရင်များက တောလ္ဘက်လုပ်ရောင်ပါတယ် ဆရာဦးတင်မြင့်(ယူနွတ်) ပါလို့ ချက်ပြုတ်ဖို့ ကြက်အရှင်တွေ ၇ ကောင်ထည့်လာပါတယ် ချက်ပြုတ်ချိန်မှာ ဆရာဦးတင်မြင့် က ကြက်ကိုဟာလာလုပ်ပြီး တောထဲကခြုံဖုတ်ဘေးကို ပြစ်လိုက်ပါတယ် တကောင်ပြီး တကောင်ပါ ပထမတော့ မသေသေးလို့ ဖျတ်ဖျတ် ဆိုတဲ့ လူးသံကြားရပါတယ် နောက်တခဏ ငြိမ်သွားကြလို့ သွားကြည်ကြတဲ့အခါ တကောင်မှ မတွေ့ ရတော့ပါ အားလုံးလဲ ကြောက်လန့်သွားကြတယ် အဲဒီနေ့က အားလုံး အာလူးချက်ပြီး တို့စရာတွေလိုက်ခူး သတ်သတ်လွတ် စားခဲ့ကြရပါတယ်
အလက မှာနေစဉ် လေ့လာရေးခရီးတိုင်း ပြည်သို့ ကျောင်းဘောသင်းသွားကန်တိုင်း အမြဲလိုက်ဖြစ်ပါသည် သွားလားခရီးစရိတ်ကို ဆရာမကြီးဒေါ်သန်းတင် က ရှင်ပေးပြီး အလှူငွေလဲ ထပ်ထည့်ပေးပါသည်
အလကမှာ ဆရာဦးချစ်မြ ဆရာဦးဖိုဝေ ဆရာဦးသန်းမြင့်(ကြက်တောင်) ဆရာမဒေါ်တင်ဦး ဆရာ ဦးပု ဝက်ပုတ်ကလာတက်တဲ့ ဆရာနဲ့ သိရက်နဲ့ စဉ်စားတာမပေါ်တဲ့ ဆရာ နံမည်မေ့နေတယ် ဆရာဦးတင်လတ် ဆရာဦးသန်းမြင့်(PT အားကစား) ဘိုးကုန်က ဆရာဦးစိန်အုပ် ကတော့ အဝေက လာနေပြီဆိုတဲအသံကြားရင်း အားလုံးကြောက်ကြတယ် အလက၏အမေ့နိုင်တဲ့ဆရာများပါ.....
အလကကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးဒေါ်သန်းတင် ကျွန်တော် ၇ တန်းတက်သည့်နှစ်မှား ကွယ်လွန်သွားပါသည် .....
အလကကျောင်းအုပ်အဖြစ် ဆရာဦးတင်ဝင် လမ်းသွားရင် ခြေတလှမ်းကုထေတသန်းနဲ့ ဖြေဖြေးလေးသွားတတ်သူပါ ပညာရေးလောကမှာ အရပ်သားထဲက အခြေခံပညာဦးစီးဌာန ညွန်ချုပ်ဖြစ်သွားခဲ့သူ ရောက်လာပါတယ်
ကြက်ခြေနီ နဲ့ မြတ်စွယ်တော်ပွဲ ဆက်စပ်သွားတာက အထကရောက်တဲ့နှစ်ကစခဲ့တာပါ..... ခုနှစ်တန်းအောင် အထက ကို ပြောင်းပြီး ၈ တန်းကိုတက်ခဲ့ရပါတယ်
၈ တန်မှာ ကိုယ်တက်ချင်တဲ့ ဘာသာတွဲကြိုက်သလို ယူလို့ရတဲ့နှစ်ပါ တလအတွင်း ကိုယ်ကြိုက်ရာ သိပ္ပံ ဝိဇ္စာ ဘာသာတွဲ ပြောင်လို့ရပါတယ်
သင်္ချာအားသန်လို့ သိပ္ပံဘာသာတွဲ Bio နဲ့ယူလိုက်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ အထကရောက်တဲ့နှစ်က ကျွန်တော်တို့နဲ့ အသက်သိတ်မကွား ၅ နှစ်ခန့်သာကြီး၍ အလွန်တက်ကြွနေကြသည့် ဘွဲရ လူပျို အပျို ဆရာ ဆရာမ လေးများက အထက ကျောင်းကို ရောက်စအချိန်ပါ အသင်အပြကောင်းကြသလို ကိုယ်ဘာသာ ကိုယ့်ပိုင်ကြတယ် အခြားမြို့ နယ်တွေက လာကြတာဖြစ်တယ်
အထက ကြက်ခြေနီမှာ ဆရာမျာက သီသန့်တာဝန်ယူတာ မတွေ့ ရပါ ၁၀ တန်းကျောင်းသားကြီးများက တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ကြပါသည် ဆရာဆရာမ အားလုံးဝိုင်းဝန်ကူညီတာ တွေ့့ရပါသည်
ကျွန်တော် ၈ တန် အထကရောက်တဲနှစ်မှာ ကိုကျော်ညွန့် အလက က မူလတန်းဆရာမ ဒေါ်ခင်မြင့် ၏ သားကတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ ရပါသည်
ကျန်ကြက်ခြေနီမှာလုပ်သည့် ကျောင်းသားကြီးများကိုတော့ သိနေပေမဲ့နံမည်စဉ်းစားမရပါ ကိုကျော်ညွန့် ကို ငယ်ငယ်ထဲကခင်ခဲ့ပြီး ကိုယ်ဆရာမသာဖြစ်လို့ အထူးမှတ်မိနေတာပါ
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှား ဓါတ်မှန်ကျွမ်ကျင်သူအဖြစ် အမူထမ်းခဲ့ပြီး ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မှာ ကွယ်လွန်သွားပါတယ်
အထက ရောက်သည့်နှစ်မှာဘဲ ကျောင်းဆေးခန်မှာ လုပ်ကိုင်ခွင့််ရပါတယ်.....
ကျောင်၏ဆေးခန်းက ကျောင်းအလယ်လှေခါးက အပေါ်တက်ရင် လှေခါးနံရံနဲ့ကပ်လျှက်ညာဘက်ကွေ့ တဲ့ဘက်မှာ ၆ ပေလောက်ကိုကာပြီး အခန်းဖွဲ့ ထားတာပါ ၈ တန်မှာဘဲဆေးခန်းသော့ကို ကျွန်တော်ကိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ဆေးခန်းကဘီရိုတွေထဲမှာ ဆေးမျိုးစုံပါဘဲ UNICEF ကပေးတဲ့ဆေးတွေ ဂွမ်းစောင်အနီကြီးတွေ အစပရင်ဆေးဘူး ဆေးလုံး ၁၀၀၀ ဝင်ဘူး ၁၀ ဘူးခန့်တွေ့ ရပါတယ် မသုံးဖြစ်ပါ (ခုခါမှာတော့ အစပရင်ဆေးကို နှလုံးရောဂါ ကျိုတင်ကာကွယ်ဆေးအဖြစ်သောက်နေကြပါတယ် ထိုစဉ်ကတော့ အဖျားပျောက်ဆေးအဖြစ်သုံးပါတယ် ဒါပေမဲ့မသုံးးဖြစ်ခဲ့ပါ) အေဘီစီ ကိုဒါနင် အဖျားအကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများကို ဘီဘီအိုင်က ဖေါဖေါသီရနေခဲပြီဖြစ်လို့ပါ ကျောင်းဆေးခန်မှာလဲ အေဘီစီ ကိုဒါနင်တို့ ပေါပေါသီသီရှိပါတယ် လတ်လောအနာတွက် တင်ချာအရည်နဲ့ စေးပြစ်ပြစ်တင်ချာ ယာနာအတွက်ဆိုရင် ဘတ်စကေဘီ လေဝင်ရင် လင်နမင်မျိုးစုံး ရှူဆေး အယ်လ်ကိုဟော စတဲ့ဆေးမျိုးစုံ ဂွမ်း ပတ်တီး ပလာစတာ် ဟင်ဒီပလပ် ကစ တော်တော်စုံရှိပါတယ်
တခါတော့ ၈ တန်နှစ်မှာပါ ဓါတုဗေဒသင်သည့် ဆရာမ ဒေါ်တင်ကြည် ပါ ဓါတုဗေဒနဲ့ ပါတ်သက်လို ဆရာမမေးတိုင်းဖြေနိုင်လို့ အမြဲစာမေးပါတယ် အဲဒိနေ့က ဆရာစာမေမယ်ထင်ပြီး စာမရလို့ ဆေးခန်ထဲတခါးပိတ်ပြီး သွားနေဘူးပါတယ် ဆရာမသိလို့ စိတ်ဆိုးသွားတယ်
အထက၏ ကျောင်းဆေးခန် မြတ်စွယ်တော်ပွဲမှာ နှစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါသည်.....
ကျောင်းဆေးခန်းနေရာက စွယ်တော်ဆင်ထွက်ပေါက်ဘယ်ဘက်ဘေးကပ်ရက်မှာပါ ဆိုင်ခန်း ၄ ခန်းစာလောက်နေရာယူထားတာပါ ဆေခန်ရှေ့ တည့်တည့်က ထိုစဉ်က ခေတ်မှီဓါတ်ပုံတိုက်ပါ ကျောင်းဆေးခန်းကို UNICEF ကပေးသည့် ဂွမ်းစောင်အနီကြီးများဖြင့် ကာရံထားပါသည် ကျမ္မာရေးမူဆေးခန်းက ဘုရားကြီး အလယ်ဝင်ပေါက် ဝင်လို့ရှိရင်းဘယ်ဘက် အလွန်ကြီးပြီး မြင့်လဲမြင့်တဲ့ မီးသတ်မျော်စင်ကြီး ဘေးအောက်မှာ မီးသတ်အဆောက်အဦးလေးထဲမှား ဆေးရုံးကသူနာပြုဆရာမတွေနဲ့ ဆေးခန်းဖွင့်ထားပါသည်
မီးသတ်မျှော်စင်ကြီးကို အမှတ်တရရေးတာက အဲဒီမျှော်စင်ကြီးပေါ်တက်ဖူးခဲ့လို့ပါ နောက်ပိုင်းတက်ဖူးသူရှားပါလိမ့်မည် ကျွန်တော်လဲ သတ္တိရှိလို့ မဟုတ်ပါ မခံချင်စိတ်ကြောင့် ကြောက်ကြောက်နဲ့တက်ဖြစ်တာပါ တကယ်မြင့်ပါတယ် ထုကြီးထည်ကြီး သစ်ကောင်းတွေနဲ့ ဆောက်ထားပေမဲ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကဆောက်ခဲ့တာဖြစ်လိမ့်မယ်
ကျွန်တော်တက်သည့်အချိန်က လှေခါးထစ်တွေ တော်တော်ဆွေးနေပါပြီ ၃ ခါလောက်အပေါ်ဆုံးမှား တက်ထိုင်ဖြစ်ပါတယ် ဖြစ်ပုံက ကျွန်တော်နေတာက အတွင်းလမ်းမှား အလယ်တန်ကျောင်းမူလတန်းမှား ကျောင်းစနေရတော့သူငယ်ချင်းအားလုံးက မြို့ ပေါ်မြို့ လယ်ကများတယ် အဲဒီအထဲမှာ အာကစားတော် အပြေးအတက်အခုတော်တဲ့ ၃၇ လမ်းက သူငယ်ချင်း ပေါ်ဦး ခေါ် မျိုးညွန့် လဲပါတယ် သူအမေက ရနကုန်လမ်း ၁၁ လမ်းထိပ်မှား ထ္မင်းဆိုင်ရောင်းခဲ့တယ် သူကမြို့ လယ်ခေါင်လူလယ်ပေါ့ဘုရားကြီးထဲမှာလဲ သူတို့နဲ့ ပြေးလွားဆော့ကစားဘူးပါတယ်
တခါတော့ ဘုရားကြီးထဲ ပြေလွားဆော့ကစားနေရင် မျော်စင်ပေါ်တက်မယ် လုပ်ပါလေရော ဧပြီးလကုန်လောက် မိုပေါက်ကလေး တစက်တစက်အနည်းငယ်ကျချိန် ည ၈ နာရီလောက်မှာ ကျွန်တော်ကလဲ ဘာလုပ်ရမလဲ သစ်ပင်အနိမ့်တောင် ကာင်းကောင်းကန်းကန်း မတက်တတ် မတက်ရဲခဲ့ပေမဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်တက်တော့ မခံချင်စိတ်နဲ့ လိုက်တက်ရတော့တာပါဘဲ
ပေါ်အူး စစ်ထဲဝင်သွာပြီး စစ်ထဲအားကစားဘဲ လုပ်ရတယ် မိတ္ထီလာက မ်ိန်မခိုးလာတုံး ကျွန်တော်မြို့ ရောက်ထာနဲ့ကြုံလို့ သူမဂ်လာဆောင်မှား လက်ဖွဲလက်ခံနေရာထိုင်ပေးခဲရတယ် နောက်တန်းမှား အားကစားမလုပ်ချင် ရှေ့တန်းထွက်တယ်လို့ သိရတယ် ခု ဘယ်ရောက်နေသည်မသိ....
ထိုစဉ်က ကျမ္မာရေးမူးက ဂျပုလေး ကိုစိန်ဝင်း ကြက်ခြေနီကို အကူအညီများစွားပေးခဲ့ပါတယ် ကျောင်းဆေးခန်းအတွက်လဲ ဆေးမျိုးစုံးကူညီပေးခဲ့ပါတယ်
ကျောင်းဆေးခန်းကို အထက ဆရာဆရာမ အားလုံး ညစဉ်လာထိုင်ကြပါတယ် ကျောင်သား ကျောင်းသူ အဖွဲဝင် ဟုတ်သူရော မဟုတ်သူရော လာရောက်ထိုင်တာ အမြဲစည်ကားနေပါတယ်
ကျွန်တော်ကျောင်းမှား ဆေးခန်းကိုင်သလို မြတ်စွယ်တော်ပွဲမှာလဲ ကျောင်းဆေးခန်းမှား တဦးတည် ကျန်အဖွဲဝင်များက အပြင်တွေမှား ကြက်ခြေနီယူနီးဖေါင်းတကားကားနဲ့ သွားနေကြပေမဲ ဆေးခန်းလာသမျှကို ဆေးပေးဆေးထည့် လုပ်ပေးနေခဲ့ပါတယ် အိမ်ပြန်ရေချိုး ထ္မင်းစားချိန်မှအပ အချိန်ပြည့်ဆေးခန်မှားထိုင်ခဲ့ပါတယ်
မြတ်စွယ်တော် ကျင်းပသည့် ၄ ရက်အတွင်းမှား ဆေးခန်းကို အနာမျိုးစုံး ထိခိုက်မူမျိုးစုံ နေမကောင်း ခေါင်းမူး ခေါင်းကိုက် လေဝင် အဆစ်လွဲ အစုံပါဘဲ ထိုစဉ်က ဆေးခန်းမှာ ဆေးစုံစုံလင်လငိရှိလို့ လာသမျှကို ကူညီနိ်ုင်ခဲ့တယ်.....
စွယ်တော်လှည့်ရက်ဆိုရင်း ရှူဆေးကို ဂွမ်းထဲထည့်ပြီး အလျှံပယ်ပေးဝေနိုင်ခဲ့တယ် ယာနာနှင်းကူနာတွေကစ လာပြကြတယ် သန်စင်ပြီး ပွေးယာနာသတ်တဲ့ အဆီခဲဘူး Oil နဲ အနာကိုသုတ်လိမ်းပေးလိုက် တချို့ ဆို ၄ ရက်လုံးလာဆေးထည့်တာတွေ့ ရတယ်
တနှစ်မှာ ဝက်ပုတ်နားမရောက်ခင် စွယ်တော်ကပြန်သည့်ကာ ကားမှောက် မီးလောင်လို့ လူအချို့  သေ ဒါဏ်ရာရသူလဲများပါတယ် ကြက်ခြေနီအားလုံးသွားရောက်ကူညီကြရတယ်
ကျွန်တော်နေတဲ့ အတွင်းလမ်းမှာက မိုးတွင်းဆို ထိုစဉ်ကမိုးကောင်လို့ မိုးရေးချိုးကြတယ် တတ်နိုင်သူက အုတ်ရေကန်ထားပါတယ် နွေရာသီတရာသီးလုံး အုတ်ရေကန်ကရေကိုသောက်ရေအဖြစ်သုံးကြတယ် အိမ်မှာက ကျောက်စည် နဲ့ စဉ်အိုးဘဲရှိလို့ အဒေါ်ကြီးများက စလင်ဘုန်တော်ကြီးကျောင်က ရေတွင်းရေကို နွေဆိုသောက်ရေ အတွက်နေ့စဉ်သွားခတ်ကြတယ်
ရေချိုးတာက လမ်းကရေတွင်းမှာပါ လမးရေတွင်းခန်းပြီးဆိုရင် အမြဲတန်းရေပြည်နေပြီး အအေးဓါတ်လွန်ကဲသည် ဆားငံရေတွင်းမှာ ရေချုိးရပါတယ် ရေကအလွန်ငံပြီး ခါသက်သက်နေတယ်
ငယ်စဉ်က ဘာကြောင့်လဲမသိ တကိုယ်လုံးမှာ အပူဖုတွေ မွေးကျွတ်နာတွေ အမြဲပေါက်တယ် တင်ပါးတွေမှာလဲ ပွေးလဲခဏခဏဖြစ်တယ် တကိုယ်လုံးအမာရွတ်ကလေးတွေ ပြည့်နေသည်ထင်ရတယ်
စင်္ကာပူမှာ စွန့်ပြစ်ဆီတွေကို ဒိဇယ်အကြမ်းပြန်ချက်တဲ့ စက်ရုံမှားအလုပ်လုပ်စဥိ ပေါက်ကွဲမူဖြစ်လို လယ်ပင်းမေးရိုးခြားမှာ ဒါဏ်ရာရရှိခဲဘူးပါတယ် သွေတွေမတရာကျနေပါတယ် ကျွန်တော်မျက်နှာသုတ်ပဝါကြီးတခုနဲ့ တအားဖိထားပါတယ် ဆေးရုံကားလာတော့ တက်လိုက်သွားပါတယ် တိုးပါရိုးကဆေးရုံမှာ ထိုင်နေရပါသေးတယ် တွန်းကုတင်ပေါ်တင်ပြီး ခွဲစိတ်ခန်းဝင်တော့ ခွဲစိတ်ခုံက တွန်းကုတင်ထက် တပေကခန့်မြင့်နေရာ သူနာပြုဆရာမတွေ မ မတင်ခိုင်ဘဲ ကိုယ်ဖာသာတက်လိုက်ပါတယ် ထူးဆန်တာက စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာမူကြောင့်လားမသိ ခွဲစိတ်ခုံပေါ်တက်သည်အထိ နာကျင်မူ့ကိုမခံစားရပါ ခွဲစိတ်ဖို့ မေ့ဆေးပေးလိုက်ပါတယ်
အဲဒီအချိန်မှာ လူတယောက်ကျွန်တော့ကို အတင်လာဆွဲပါတယ် ကြည့်လိုက်တော့ သေသွားတဲ့ ကျွန်တော့အသိဖြစ်နေတယ် အစိုးရအလုပ်မှာ တရုံးထဲအတူလုပ်ခဲဖူးသလို နိုင်ငံခြားကတခေါက်ပြန်ရောက်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ရာမှာ သူဆက်သွယ်ပေးမူနဲ့ ပက်ဆီဦးသိန်ထွန်း က ကျွန်တော့ကို ပက်ဆီကိုယ်စလှယ် စမ်းချောင်မှားရခဲ့ပါတယ် သူသေသွားတာက မကြားသေးပါ ကျွန်တော်လဲ မှတ်မိနေလို့ အတင်းရုန်းကန်ပါတယ် လွတ်လဲသွားရော ကျွန်တော့ခွဲစိတ်မူလဲ ပြီးသွားပြိး
အခန်းတခုထဲမှာ ပါမစားမသောက်ရ ထားပါတယ် ခွဲစိတ်ပြီးကာစ အဲဒီအချိန်မှာ လူကအားအင်ကုန်ခမ်း ကိုယ်ခံမရှိရင် ချွဲသလိတ်တွေ လယ်ပင်မှာ ဆို့တတ်ပါတယ် သတိရှိဖို့လိုပါတယ်
သတိမရှိရင် သလိတ်ဆိုပြီး သေနိုင်ပါသည်
နောက်နေ့ ဆရာဝန်ကြီး နဲ့ ဆေးကျောင်းသားတွေ ကျွန်တော့ကိုလာကြည့်ကြပြီး အင်မတန်ကံကောင်းကြောင်း နဲနဲလေးပိုထိသွာရင် ပါစပ်စောင်း မျက်စိစောင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြပါသည်
စက်ရုံကရော်ကြေး စင်္ကာပူ ဒေါ်လာတသောင်း ပေးပါတယ် ၁၉၉၆ ကပါ.....
နောက်ဆုံးးဖြစ်ထာက် အမေရိကန်ရောက်ပြိး အလုပ်ဝင်ပြီးမှပါ အလုပ်လုပ်တော့ လစဉ်ဆေးအာခံ လစဉ် ဒေါ်လာ ၆၀ သွင်းပြီးထားရတာပါ
၂၀၁၂ မှာ ချောလဲလို့ လက်ထောက်လိုက်ထာ ဘယ်ဘက်လက်ဖျံကျိုးသွားပါတယ် စဖြစ်ဖြစ်ချင်းမနာလို့  မသိခဲ့ပါ တဖြည်ဖြည်ရောင်လိုရ ပုက္ကလိကဆေးရုံတခု သွားပြီးအရေးပေါ်ပြပါတယ် ည ၁၂ နာရီထိုးနေပြီ စမ်းသပ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ကြည့်တော့ လက်ဖျံရိုးကျီုးသွားကြောင်းသိရပါတယ် ကျောက်ပါတ်တီးစီးပြီး နောက်နေ့မှလာဖို့ချိန်လိုက်ပါတယ်
နောက်နေ့သွားတော့ အားကစားစပါယ်ရှယ်လစ် အရိုးအထူးကုဆရာဝန်နဲ့ ဘယ်ဆေးခန်း အခန်းဘယ်လောက်မှာသွားတွေ့ ဖို့ လိပ်စာနဲ့ ဓါတ်မှန် စာရွက်စာတမ်းပေးလိုက်ပါတယ် ဆေးရုံမှား မဟုတ်တော့ဘဲ အထူးကုတွေဆေးခန်းဖွင့်ထားသည့် ဆေးခန်ကိုသွားရပါတယ် ကိုယ်ပြရမည့် အားကစားစပယ်ရှယ်လစ် ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ ပြီး ဓါတ်မှန်နဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေပြ စစ်ဆေးပြီး ဘယ်နေ့မှာခွဲမည် ခွဲစိတ်မည့်ရက် ဘယ်အချိန်လာရန် ကပ်ပြားစာရွက်ပေးပါတယ် ဆရာဝန်ကခွဲစိတ်ပြီးရင် ခွဲစိတ်တဲ့ဘယ်လက်က ခု ညာသန် ညာလက်ထက် ပိုိသန်သွားမည် ပိုကောင်းသွားမည် ပြောပါတယ် တကယ်လဲခွဲစိတ်ထာကို သိတောင်မသိလိုက်ရသလို ခွဲစိတ်ထားသည့် ဘယ်ဘက်က မူလ ညာသန် ညာလက်ထက် တကယ်လဲပိုသန် ပို၍အသုံးပြု့ ကောင်းးနေပါတယ်
ကုသစရိတ် ဒေါ်လာ သုံးသောင်းကျော်ကျပေမဲ့ ဆေးကုသမူ့ အာမခံလုပ်ထားလို့ အာမခံကုမ္မဏီက ပေးချေပေးပါတယ် မိမိကုန်ကျငွေက ဒေါ်လာ ၅၀၀ ခန့်သာဖြစ်ပါတယ်
မွေးရပ်မြေ မြိုကလေးမှ ထွက်ခဲ့ပြီး ဘဝနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ကိုဝင်ခဲ့ရာ ကြီးလာသည်နဲ့မျှ အမာရွတ်ကလေးများအားလုံး ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သလို အနာဖုတွေလဲ မပေါက်တော့ပါ တနှစ်တခါတောင် ဖျားနာမူမရှိခဲ့သလို ဒီအသက်အရွယ်အထိ ခေါင်းတခါမှ မကိုက်ဖူးပါ ခုထိရောဂါကြီးကြီမာမား တခုမှမခံစားရ မတွေ့ မရှိရသလို ခုအချိန်ဟာ တသက်တာမှာ ကျမ္မာရေအကောင်းဆုံးအချိန်လို့ ခံစားနေရပါတယ်
ကြက်ခြေနီ မှာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း အကျိုးတရာလို့ လက်ခံယုံကြည်ပါသည်..... တဦး နဲ့ တဦး ကူညီ ယိုင်းပင်း နိုင်ကြပါစေ.....
Posted by Tha Ra Phi Nyunt at 10:06 PM0comments
.မြန်မာ.....သမိုင်းစာအုပ်များံသမိုင်းစာအုပ်များ . August 25, 2014 at 11:14pm သမိုင်းစာအုပ်များ (၄၈ အုပ်) ဖတ်ရှု့ စုဆောင်းလိုသူတွေ အတွက် ************************************************************ *** (၁) အင်းဝရွှေနန်းရောက် ဗြိတိသျှ သံအဖွဲ့မှတ်တမ်း (၁၈၅၅)(တက္ကသိုလ်နေ၀င်း) http://www.mediafire.com/?z9ypq726494lac2 (၂)အလောင်းမင်းတရားကြီး၏ကုန်းဘောင်ရွှေပြည် (ဒေါက်တာ တိုးလှ) http://www.mediafire.com/?jx2oxf72ilt5a8k (၃)ကုန်းဘောင်ရှာပုံတော် (ညိုမြ) http://www.mediafire.com/?idhxn8fo547u79d (၄)အောင်ဆန်းသူရိယ ဗိုလ်တိုက်ချွန်း (တက္ကသိုလ်စိန်တင်) http://www.mediafire.com/?ht3gdri35qjcolc (၅)အိုဘယ့်အနော်ရထာ (တက္ကသိုလ်စိန်တင်) http://www.mediafire.com/?8uzaxzzzzdt9dyf (၆)၁၉၄၅ မြန်မာနိုင်ငံ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးသမိုင်း (တက္ကသိုလ်စိန်တင်) http://www.mediafire.com/?1y75jvx7jcb9c63 (၇)ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗိသုကာဦးသန့် ၁ (တက္ကသိုလ်စိန်တင်) http://www.mediafire.com/?2y0baijuh4lwwhl (၈)ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗိသုကာဦးသန့် ၂ (တက္ကသိုလ်စိန်တင်) http://www.mediafire.com/?41cyj328ij0mrnz (၉)ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗိသုကာဦးသန့် ၃ (တက္ကသိုလ်စိန်တင်) http://www.mediafire.com/?aagkbtzijt0woxf (၁၀)ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗိသုကာဦးသန့် ၄ (တက္ကသိုလ်စိန်တင်) http://www.mediafire.com/?5wjjc614w9a48z5 (၁၁)သံလွင်မြစ်ကမ်းတိုက်ပွဲ (တက္ကသိုလ် နန္ဒမိတ်) http://www.mediafire.com/?4r06dy1l62o6l08 (၁၂) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုမှတ်တမ်း( တက္ကသိုလ်နေ၀င်း) http://www.mediafire.com/?clqr7837agtc42r (၁၃)နေဝင်ဘုရင်များ (ကျော်အောင်) http://www.mediafire.com/?j7em79774th5pbp (၁၄)အို ဂျေရုဆလမ် (ကျော်အောင်) http://www.mediafire.com/?9w964qgos05veef (၁၅)အမြဲသတိထားရမည့် အိမ်နီးချင်း (ကျော်ထင်နော်ရထာ) http://www.mediafire.com/?441z3s3g8copbw1 (၁၆)ပန်ထွာဘုရင်မ (စိမ့်-ပညာရေး) http://www.mediafire.com/?jbyj8tz8fisfu3q (၁၇)ရှေးမြန်မာမင်းများလက်ထက်ထောက်လှမ်းရေး (ဗိုလ်မှူးကြီးစန်းပွင့်) http://www.mediafire.com/?cv9hmdu0323e2c4 (၁၈)မြန်မာစာပေပညာရှင် တွင်းသင်းမင်းကြီး (မင်းသုဝဏ်) http://www.mediafire.com/?no1vhafb29149am (၁၉)လင်းယုန်သစ်လွင်-သေမင်းတမန်ရထားလမ်းကိုယ်တွေ့ချွေးတပ်မှတ်တ မ်း http://www.mediafire.com/?g70t623g2r8gzio (၂၀) သမိုင်းထဲကမန္တလေး၊ မန္တလေးထဲကသမိုင်း http://www.mediafire.com/?4f8oqlj9sb32td2 or https://docs.google.com/leaf?id=0B_tDQldqWQvgZmVlMDg5YmEtOWVlYS00MjJiLTk0OTctYTE5MTkwMzcxNmVk&hl=en (၂၁) ဧကရီဖွားစော http://www.mediafire.com/?f0mzg9mlxdr3uyb or https://docs.google.com/viewer?a=vπd=explorer&chrome=true&srcid=0B_tDQldqWQvgNzRlMzU1NmUtNDFkNi00YjhlLWE2OWItNzViYTE5NjcwNDc0&hl=en (၂၂) ပန်းသာမစာဥ (သခင်ဘသောင်း) http://www.mediafire.com/?hp5995cwhc39h3d (၂၃)ကျော်စွာ ၁၀၀ (ဒေါက်တာသန်းထွန်း) http://www.mediafire.com/?j6sc2f5gkfd1rgd (၂၄)မြန်မာ့သမိုင်းမြေပုံများ (ဒေါက်တာသန်းထွန်း) http://www.mediafire.com/?0uo43g58qmdruvv or https://docs.google.com/file/d/0B5MWMa_nIbQOeXFkV0psbzdUdnc/edit (၂၅)၀ိတိုရိယနဲ့အယ်လဗတ်ပြတိုက်မှာရှိတဲ့မြန်မာအနုပညာလက်ရာပစ္စည်း(ဒေါက်တာသန်းထွန်း) http://www.mediafire.com/?xj9vfb33w1r3y08 or https://docs.google.com/file/d/0B5MWMa_nIbQOdHI0YWN4QVh2VDQ/e (၂၆)ကုန်းဘောင်ခေတ် ဆောင်ကြာမြိုင် မှတ်တမ်း (ချစ်စိန်လွင်) http://www.mediafire.com/?jtewp5s117iz0oy (၂၇)နယ်လှည့်ရာဇ၀င်(ဒေါက်တာသန်း ထွန်း) http://www.mediafire.com/?dd4aes1m186ard9 (၂၈)မြန်မာဆိုတာ(ဒေါက်တာသန်းထွန်း) http://www.mediafire.com/?5o78q84rebldj4q (၂၉)ငါပြောချင်သမျှ ငါ့အကြောင်း(ဒေါက်တာသန်းထွန်း) http://www.mediafire.com/?5yrmiyvbpm6yzmb (၃၀)မြန်မာ့သမိုင်းမြေပုံများ(ေ ဒါက်တာသန်းထွန်း) http://www.mediafire.com/?fh3os6f4iwn7t46 (၃၁)သမိုင်းနှင့်စကားပြောခြင်း( ဒေါက်တာသန်းထွန်း) http://www.mediafire.com/?rdmyku44i5udky1 (၃၂)The Royal Orders of Burma A.D. 1598-1885 PART FOUR, A.D. 1782-1787 (Part IV) (တော်ဝင်အမိန့်တော်ပြန်တမ်းများ -အတွဲ ၄)(ဒေါက်တာသန်းထွန်း) http://www.mediafire.com/?0imlhrc6xfppih6 (၃၃)The Royal Orders of Burma 1598-1885 PART THREE, A.D. 1751-1781(Part III)(တော်ဝင်အမိန့်တော်ပြန်တမ်း များ-အတွဲ ၃)(ဒေါက်တာသန်းထွန်း) http://www.mediafire.com/?ucug2l03l1u4mcc (၃၄)THE ROYAL ORDERS OF BURMA, A.D. 1598-1885 PART TWO, A.D. 1649-1750 (Part II)(တော်ဝင်အမိန့်တော်ပြန်တမ်းများ-အတွဲ ၂)(ဒေါက်တာသန်းထွန်း) http://www.mediafire.com/?5zy9vs59ar4xjfb (၃၅)THE ROYAL ORDERS OF BURMA, A.D.1598-1885 PART ONE , A.D.1598-1648 (Part I)(တော်ဝင်အမိန့်ပြန်တမ်းများ-အ တွဲ ၁)(ဒေါက်တာသန်းထွန်း) http://www.mediafire.com/?u566m1yau39o5hg (၃၆)သီပေါမင်း ပါတော်မူ အရေးတော်ပုံ (ဦးဖိုးကျား) http://www.mediafire.com/?ixcuxvucrl71rw6 (၃၇)ခေတ်မီမြန်မာရာဇ၀င်အကျဉ်း (ဦးဖိုးကျား) http://www.mediafire.com/?97mrh7zjqri3do0 (၃၈)မနုမဟာသခင်ကြီး၏ လှို့ဝှက်မှတ်တမ်း (ဘုန်းပြည့်တေဇာ) http://www.mediafire.com/?easlot6fkfiz2r1 (၃၉) မြန်မာမြို့ ဟောင်းတကောင်းရုပ်ပုံလွှာ (ချစ်စံဝင်း) http://www.mediafire.com/?doqv959794g3btq or https://docs.google.com/viewer?a=vπd=explorer&chrome=true&srcid=0B_tDQldqWQvgMDFhNjdlNzAtYTQzZS00MzNmLWFlMDEtYmU4YjI5YWU5NzEx&hl=en (၄၀) မြန်မာအစ အထောက်အထားလေ့လာချက်စာတမ်း(ချစ် စံဝင်း) http://www.mediafire.com/?57221me1wb0bmy3 or https://docs.google.com/viewer?a=vπd=explorer&chrome=true&srcid=0B_tDQldqWQvgOGM1MDBkY2EtNGIzYi00NjAyLWEwYzEtOTg3ZWMwNzNmMzgz&hl=en (၄၁) ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီး၏လျှို့ ၀ှက်ချက်များ(ချစ်စံဝင်း) http://www.mediafire.com/?1bxzq91rcfkjzv2 or https://docs.google.com/leaf?id=0B_tDQldqWQvgYmRiYzlkNzEtMWJlZC00YzE1LTkyMmUtZDc0Y2QwMTJiNjVj&hl=en (၄၂)ဂျပန်ခေတ်ရက်စွဲသမိုင်း http://www.mediafire.com/?d1f8bjvll3p8290 (၄၃)ရာဇာဓိရာဇ်အရေးတော်ပုံကျမ်း (နိုင်ပန်းလှ) http://www.mediafire.com/?h6ydd7md9k88z9j (၄၄)အနော်ရထာအရင်က မြန်မာနိုင်ငံ (ဗိုလ်မှူးဘရှင်) http://www.mediafire.com/?dl53g30llva3qj2 (၄၅)ကုန်းဘောင်ရှင်းတမ်း (မောင်သန်းဆွေ) http://www.mediafire.com/?en62ky1pgy4ikvm (၄၆)ထီးရနံ့နန်းရနံ့ (မောင်သန်းဆွေ) http://www.mediafire.com/?ycclagkb349pccy (၄၇)ပထမမြန်မာများ (မင်းယုဝေ) http://www.mediafire.com/?jyukoq88u43qon4 (၄၈)နန်းစံကြသူများ (မောင်ဖေငယ်) http://www.mediafire.com/?658hbai7j0s3nb0
Posted by Tha Ra Phi Nyunt at 7:34 AM0comments
ကျော်သူ လိမ်ပေးရပြန်ပြီ.....Eco ကျောင်းတော်ကြီရေ ရှင်းပေးပါအုံး
. ကျော်သူ လိမ်ပေးရပြန်ပြီ.....Eco ကျောင်းတော်ကြီးရေး ရှင်ပါအုံး (ယုံစရာတောင်မရှိဘူး ရေးတဲ့စာဖတ်ရလို့ဘဲ.....လာမည့် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် လိမ်ဆင်ကိုစတင်တာလား) ပြည်သူဂုဏ်ရည် လိမ်ဆင်တုံးကလဲ ကျော်သူ သန်းမြင့်အောင် ဇီကွက် တိုကပြည်ပမှာ ကိုယ်လူတွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့တာကို ကြိုရေးခဲ့ပါတယ် မိမိတို့ကိုမိမိတို့ ဆုပေးဖို့တည်ထောင်တာပါ ကြိုရေးတဲ့အတိုင်း ကျော်သူ သန်မြင့်အောင် တို့ကိုပေးခဲ့ပြီးပါပြီ.....ခုလဲ နောက်လာမည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို ရည်မှန်းပြီး လိင်ဆင်ကို စတင်လိုက်ပါပြီ..... ကျော်သူ က တော့လိမ်ပေးရပြန်ပြီး ဇီးကွက် ဆယ်တန်းတောင်မအောင်ပါ ကျော်သူ က Eco မှာ တက်နေသူလို့ ရေလိုက်တယ် Eco မှာတက်နေသူဆိုရင် ဟိုတုံးကထဲက အလွန်ကြွားကြမှာပါ ခုမှ စရေးတာပါ တခါမှမရေးဘူးပါ အရင်လက်ထပ်နှစ်တွေ ကျော်ဖြတ်လာတာ များကြပါပြီး Eco မှာ တက်ခဲ့ကြောင်း ဘယ်နေရာဘယ်တုံးကမှရေတာမတွေ့ ခဲ့ကြပါ ခုမှရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လိမ်ရပြန်ပြီ ဆယ်တန်မအောင်ပါ သိလိုပြောတာကြာပါပြီ သူတို့ထောင်တဲ့လူမူဂုဏ်ရည် ဝက်ဆိုက်မှာလဲ ဇီးးကွက် ရှုပဗေဒ နဲ့ ဘွဲရတယ်လို့ လိမ်ရေတာလဲ ဖတ်ခဲဘူးတယ် သူတို့တည်ထောင်ပြီး သူတိုကိုပြန်ပေးတဲ့ ဂုဏ်ရည်ဆုကိုလဲ ကျွန်တော်ကြိုတင် ရေးထားသည့်အတိုင်း အောက်မှာပါပုံထဲက ကျော်သူ နဲ့ သန်းမြင့်အောင် ရပြီးပြီး ခရိယာန်အသင်းကပေးတဲ့ ဘွဲဝတ်စုံ ဝတ်ပြီးကြွားရတာလဲ အမောပါ ကျော်သူ က ရှုပ ပထမနှစ်သာတက်ခဲ့ရပါတယ်.....ဇီးကွက် အဖေက နိုင်ငံခြားသားထံမှ လာဒ်ယူမူနဲ့ ထောက်လှမ်းရေးမိလို့ နိုင်ငံခြားရေးဌာန အစိုးရအလုပ်က ပြုတ်တော့မှာ ဘဝပျက်နေတော့မှာကို တရားရှိသူတဦးက ကယ်တင်ပြီးတခြားပြည်တွင်း အစိုးရဌာနမှာ ပြန်ပေးလိုက်ထာပါ.....နာရေးကူညီမူအသင်း(ရန်ကုန်) နဲ့ ပါတ်သက်လို့လဲ ဆရာဦးသုခ ကို အသုံးချလ်ိမ် အမျိုးမျိုးလိမ်ခဲ့ ပြီးပါပြီ တသက်လုံးလိမ်နေရတဲ့ နံမည်ကြီးဖို့ နေရာမပျောက် ကုလာထိုင်မြဲဖို့ လုပ်ရတဲ ဘဝပါလား အားလုံး သင်္ဃာန်စာယူသင့်ကြပါတယ်.....http://tharafi.blogspot.com/ နဲ့http://tharafi.blogspot.com/2013/06/blog-post_20.html May Chiara shared Kyaw Thu's status update. Kyaw Thu added2new photos. ၃၃ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် သြဂုတ်လသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ စာပေ၊ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတနှင့် နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ အများဆုံး ကြွေလွင့်သွားရရှာသော လဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မြန်မာ့သမိုင်း၏ အထင်ကရဖြစ်သော (၈၈) အရေးအခင်း၊ ဖြစ်ခဲ့သော ရင်တုန်လှုပ်ရှားဖွယ် လတစ်လလည်းဖြစ်သည်။ သည့်အပြင် သြဂုတ်လသည် ပရဟိတမောင် နှံဟု တင်စားခေါ်ဆိုကြသော ကျော်သူ + ရွှေဇီးကွက် တည်းဟူသော စွယ်တော်ရွက်နှစ်လွှာ ပူးပေါင်းခဲ့ သော လတစ်လလည်းဖြစ်သည်။ ဝါတွင်းကာလတွင် မင်္ဂလာဆောင်နှင်းခြင်း မပြုသင့် ဟူသော အယူ သည်းမှုအား တိုက်ဖျက်ခဲ့သော ပရဟိတမောင်နှံတို့၏ မင်္ဂလာသက်တမ်းသည်လည်း (၃၃) နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်တော့သည်။ လွန်ခဲ့သော (၃၃) နှစ်ကာလက ရိုးဆင်းသော Eco ကျောင်းသူ ရွှေဇီးကွက်နှင့် ဆိုးသွမ်းသော ကျော်ဝင်း (ခ) ကျော်သူ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ပေါင်းစည်းခြင်း (၃၃) နှစ်ပြည့်ခဲ့သော သြဂုတ်လ (၃၁) ရက်နေ့တွင် ဖြတ်သန်းခဲ့သော ပရဟိတသက်တမ်း ဆယ်စုနှစ်ကျော်ကာလများ၌ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ဖြတ်သန်း၊ တွေ့ကြုံ ခံစားနားလည်ခွင့်ရခဲ့သော ဗြဟ္မစိုရ်တရား၊ ဓမ္မနှင့်ပရဟိတ အတွေ့အကြုံများတို့ကို အတွေ့အကြုံများတို့ကို နှလုံးသားနှင့် ရင်းခဲ့ပြီး ရေးသားခဲ့မိသော စာသားများ၊ ဆောင်းပါးများနှင့် အင်တာဗျူးများတို့ကို ပဉ္စဂံစာ အုပ်တိုက်မှ စုစည်း၍ ထုတ်ဝေမည့် “ပရဟိတကာချုပ်ကြီးထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ” အမည်ရှိ စာအုပ်အား မင်္ဂ လာသက် (၃၃) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ၁၈.၈.၂ဝ၁၄ ရက်နေ့တွင် စတင် ထုတ်ဝေဖြန့်ချီတော့မည် ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် အမှာစာများအား အမှတ် (၁၆၇)၊ မြေညီထပ်၊ ၃၅ လမ်း(လယ်)၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း - ဝ၁ ၃၇၇ ဝ၆၁ သို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်၍ မှာကြားနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်း ကောင်း ပါးအပ်ပါသည်။အတွေ့အကြုံများတို့ကို နှလုံးသားနှင့် ရင်းခဲ့ပြီး ရေးသားခဲ့မိသော စာသားများ၊ ဆောင်းပါးများနှင့် အင်တာဗျူးများတို့ကို ပဉ္စဂံစာ အုပ်တိုက်မှ စုစည်း၍ ထုတ်ဝေမည့် “ပရဟိတကာချုပ်ကြီးထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ” အမည်ရှိ စာအုပ်အား မင်္ဂ လာသက် (၃၃) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ၁၈.၈.၂ဝ၁၄ ရက်နေ့တွင် စတင် ထုတ်ဝေဖြန့်ချီတော့မည် ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် အမှာစာများအား အမှတ် (၁၆၇)၊ မြေညီထပ်၊ ၃၅ လမ်း(လယ်)၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း - ဝ၁ ၃၇၇ ဝ၆၁ သို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်၍ မှာကြားနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်း ကောင်း ပါးအပ်ပါသည်။ Nyunt Thein's photo.
Posted by Tha Ra Phi Nyunt at 8:13 PM 1 comments
Zawgyi One (or) Unicode ဘယ်ဘက်...အပေါ်ကြည့်ပြောင်းပါ
သရဖီညွန့်(tha ra phi Nyunt)
Happy new year for all.....2013 (1)
IT သုတ (2)
Obama at Rangoon Airport (1)
Obama at Rangoon University (1)
welcome to Burma..... (1)
Why Buddhism? (1)
ကိုယ်တွေ့ သုတ (4)
ဂုဏ်ယူပါတယ် မြန်မာများ (1)
တန်ဖိုးရှိသော စကားများ (2)
နာရေးကူညီမူအသင်း(ရန်ကုန်) ကို မတရားနည်းသုံး လုပ်ကြံပုံများ (1)
နာရေးကူညီမူအသင်း(ရန်ကုန်) နာရေးပုံပြင်များမှ (15)
မိုးဟိန်း (သားဂျာနယ်ကျော်) (1)
မဲဆောက် ပုံပြင် များ (4)
မြန်မာ့ အလှ နှင့် ရှုခင်း (17)
မြန်မာ-နိုင်ငံခြား ဆက်ဆံရေး (2)
သရဖီညွန့် ( Tha ra phi nyunt ) (17)
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာကြရအောင် (5)
ဦးအောင်သင်း ကို လုပ်ကြံခဲ့စဉ်က နာရေးပုံပြင်များမှ (1)
ကျော်သူ နဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း ဘယ်သူက ၈၈- အရေးအခင်း (1)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမတ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ.....ကျော်သူ က သက်သေပြနေသည် (1)
ပေါင်းတည်.....Paungde.....ကျွန်တော်ချစ်သော မြို့ ကလေး၏ စံပြစိတ်ဓါတ် (1)
ယောက္ခမ ကား စီးဘူးပါသလား..... (1)
Tha Ra Phi Nyunt